Guddiga Dib -u -soo -nooleynta Dhaqaalaha Beesha Washington waxay ku maalgeliyaan in ka badan $ 10 milyan sagaal mashruuc oo ka tirsan gobollada miyiga - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Dib -u -soo -nooleynta Dhaqaalaha Beesha Washington waxay maalgeliyaan in ka badan 10 milyan oo doolar sagaal mashruuc oo ka tirsan gobollada miyiga
OLYMPIA, WA-Guddiga Dib-u-noolaynta Dhaqaalaha Beesha Gobolka Washington (CERB) ayaa shalay ansixiyay deeqo $ 8,272,040 milyan ah iyo $ 1,975,000 oo ah amaah dulsaar ah oo loogu talagalay qorshaynta, horumarinta dhaqaalaha iyo mashaariicda dhismaha kaabayaasha ballaadhinta miyiga.
Shan mashruuc oo ballaarinta miyiga ah ayaa lagu ansixiyay ku dhawaad ​​$ 8 milyan oo maaliyad ah oo laga helay sanduuqa mashaariicda raasamaalka coronavirus ee CERB, taasoo awood u siineysa qiyaastii 3,362 isku-xir internet xawaare sare leh markii la dhammeeyo. Mashaariicdu waxay ku yaalaan Grays Harbor, Kitsap, Mason, Skagit iyo Thurston. Mashruuca Dekadda Skagit County ayaa sidoo kale lagu ansixiyay $ 1 milyan oo deyn CERB ah.
Ka sokow maalgelinta baahinta ballaadhan ee miyiga, guddigu wuxuu oggolaaday $ 200,000 oo deeq ah iyo $ 600,000 oo deyn ah oo loogu talagalay mashruuca dhismaha Jidka Iskaashatada ee Bariga Richland, Degmada Benton. Maalgashigan oo hoos imanaya barnaamijka iskaashiga gaarka ah ee CERB ee ay ka go'an tahay ayaa ku kaabaya $ 6 milyan oo ah maalgashi gaar ah. Intaa waxaa dheer, mashruuca Hotel Planters ee Sunnyside, Degmada Yakima, ayaa sidoo kale loo ansixiyay maalgelinta - $ 125,000 oo deeq ah iyo $ 375,000 oo deyn ah oo laga helo maalgelinta horumarinta mustaqbalka ee CERB, oo lagu kaabayo $ 50,000 maalgashiga gaarka ah. Labadan mashruuc ayaa la filayaa inay abuuraan qiyaastii 31 shaqooyin waqti-buuxa ah oo bulshooyinka ah.
Deeqaha qorshaynta oo dhan $ 125,000 ayaa sidoo kale loo ansixiyay mashaariicda ka socda gobollada Klickitat, Mason iyo Whitman.
Hel faahfaahinta dhammaan mashaariicda lagu ansixiyay shirkii CERB ee shalay halkan.
“Mashaariicdani waxay matalaan mashaariic kala duwan oo ay CERB maalgeliso. Mashaariicda horseeda kobaca shaqada iyo isku xirka baahinta ballaadhan ee gobolka oo dhan iyada oo loo marayo horumarinta kaabayaasha iyo qorshaynta. Guddigu wuxuu ku faraxsan yahay inuu iskaashi la sameeyo mid kasta oo ka mid ah bulshooyinkan iyagoo ka shaqeynaya sidii ay u abuuri lahaayeen shaqooyin joogto ah oo gaar loo leeyahay iyo marin ballaarin. ” ayuu yiri Guddoomiyaha CERB Randy Hayden.
“Maalgashiga CERB ee baahinta baaxadda miyiga ayaa ah qodob muhiim u ah ballanqaadka gobolka Washington ee ahmiyadda dhaqaale iyo sinnaanta dhijitaalka ah,” ayuu yiri Agaasimaha Ganacsiga Gobolka Washington Lisa Brown. "Helitaanka internet xawaare sare leh oo la awoodi karo ayaa xoojinaya bulshooyinka-waxaa lagama maarmaan u ah dhammaan dadka deggan inay awoodaan inay wax bartaan, shaqeeyaan, helaan telemedicine, oo ay qaataan fursadaha ay ku barwaaqoobi karaan meel kasta oo ay doortaan inay ku noolaadaan."
Gobolka Washington wuxuu isu diyaarinayaa gobolka taariikhiga ah iyo federaalka maalgelinta ballaadhinta iyo sinnaanta dhijitaalka ah. Ka sokow deeqaha iyo amaahda CERB, Guddiga Hawlaha Guud ee gobolka iyo Xafiiska Fidinta Gobolka Washington waxay iskaashi la sameynayaan bulshooyinka gobolka oo dhan si ay u keenaan helitaanka guud ee internetka xawaaraha sare leh marka la gaaro 2024. Qeyb ka mid ah dadaalkaas waxaa ka mid ah sahanka xawaaraha si loo go'aamiyo halka ay ka jiraan dulduleelo adeegga. Shakhsiyaadka ayaa ka qayb qaadan kara imtixaanka xawaaraha ee halka daqiiqo ah iyagoo booqanaya broadband.wa.gov.
Laga soo bilaabo 1982, CERB waxay ku dhowaad $ 211 milyan u goysay maamullada maxalliga ah ee gobolka oo dhan, maalgashi abuuraya in ka badan 37,800 oo shaqo, iyo maalgashi raasumaal oo gaar loo leeyahay oo dhan $ 5.8 bilyan - $ 29-ilaa- $ 1 oo ku soo noqoshada maalgashiga CERB. Akhriso Warbixinta Sharci dejinta CERB 2020
Laga soo bilaabo 2018, CERB waxay ku yaboohday $ 28 milyan kaabayaasha ballaadhinta miyiga ee awoodaha maxalliga ah iyo Qabiilooyinka. Maalgashiyadan waxaa lagu qiyaasaa in ay abuuri doonaan 18,734 iskuxir, iyada oo loo marayo 23 mashruuc, guud ahaan 60 bulshooyinka miyiga ah ee aan loo adeegsan. Akhriso Warbixinta Sharci-dejinta ee CERB Miyiga Broadband 2020
broadbandFARXADguddiga dib u soo nooleynta dhaqaalaha bulshadaDeeqaha bulshada iyo amaahdahorumarinta dhaqaalahaWar-saxaafadeed
← Ganacsigu wuxuu $ 11.4 milyan ku abaalmariyaa mashaariic muhiim u ah kaabayaasha dhaqaalaha ee 20 bulshooyinka reer miyiga ah Ka Yar Qalab Dila →